Yini ozohamba nayo ohambweni lwebhasi: uhlu lwezinto ezidingekayo - Indlela yokuphila 2022
Yini ozohamba nayo ohambweni lwebhasi: uhlu lwezinto ezidingekayo
Uyafuna ukuhamba ohambweni lwebhasi ngokunethezeka nenjabulo? Bese uthatha uhlu lwama-hacks empilo kuchwepheshe we-New Channel reality, uSonya Plakidyuk.
Ukuze kuhlanganiswe izindawo eziningi ezinhle ngangokunokwenzeka ohambweni olulodwa, ithimba elithi "Amamodeli Aphezulu ngesi-Ukrainian" kwakudingeka lihambe linqamula izwe lonke - lisuka e-Antalya liya e-Istanbul, ngenkathi livakashela iKapadosiya, ephakathi nendawo.
Ngezinye izikhathi kwakudingeka ukuchitha amahora angaphezu kuka-10 ebhasini, futhi akuwona wonke umuntu owayekwazi ukubhekana kalula novivinyo olunjalo. Ikakhulukazi emgwaqeni oyinyoka entabeni, lapho ibhasi lalibonakala selizowa eweni.
Nokho, uSonya Plakidyuk wazizwa ekhululekile kulo lonke uhambo, ebukeka elele futhi eqabulekile ngisho nasekuseni kakhulu. Iyini imfihlo yakhe?
Njengoba kwenzeka, uchwepheshe unohlu oluhloliwe lwezinto okufanele nakanjani uhambe nazo ohambweni lwakho. Futhi-ke noma yiluphi uhambo luzodlula kalula futhi ngokungabonakali.
Ngidinga umcamelo ophefumulayo onethezekile, imaski yokulala nengubo yokumboza. Uma nginakho konke lokhu, ngingalala kunoma yiziphi izimo. Ngesinye isikhathi, ngangivame ukuya ohambweni lwama-Euro futhi ngajwayela uhambo olude kangako. Futhi uma unendawo yokwelula imilenze yakho, ngokuvamile kuwukunethezeka! Futhi nginamandla amakhulu: ngiyakwazi ukufunda ebhasini ngendlela engiyifunayo. Angiguliswa wulwandle
- kusho uSonya.
Kodwa akubona bonke abanenhlanhla njengoSonya. Ngokwesibonelo, uSergei Nikityuk akakwazanga ukulala ebhasini, futhi amahora omgwaqo ayebonakala engapheli kuye.
Uhambo lwebhasi olude kakhulu ekuphileni kwami ​​lwenzeka kimi eTurkey. Kubonakala sengathi kade sihamba ngemoto sisuka eKhaphadosiya siya e-Istanbul. Angizange ngilale, angikwazanga ukozela ngisho nomzuzu owodwa, futhi kwakungikhathaza kakhulu. Kuhle ukuthi ihhotela esangena kulo lapho sifika libonakale lintofontofo, futhi ekugcineni ngakwazi ukuphumula kahle. Futhi endleleni, ngangifuna ngempela ukudla ukudla endaweni yokudlela evamile, futhi ngesizathu esithile umqondisi wethu wacabanga ukuthi sifuna ukuthenga izinto eziyisikhumbuzo, igolide, izinto zesikhumba noboya, futhi ngaso sonke isikhathi sasinikeza ukuba sime izimboni
- kusho uNikityuk.